mukwasha tezvara ambuya kumusha
Successful white farmer
Reporter: Mr. Chinos now that you have been allocated this huge farm what are your ambitions?
Chinoz: I want to be a successful white commercial farmer
Ndini wasu ndatenga
Umwe WAsu akatorwa nemwana wake nemota vakanange Harare. Zvino Wasu aiobserva zvaiitwa neson yake .Son yake yaidriva ichibhita mared robot. Vakati vasvika
paBank vakasvika bank richivharwa son ichibva yatora mari paATM. Vakazoti voenda
kunotenga grocery mari ichibva yarambe kuite enough. Son yakobva yasaine check.
Wasu akati odzokere kumusha akati oudze wife feedback achiti " Mai, Wasu abudirire. Takati tosvike Harare marobot aiite Red dzimwe mota dzichimira kuiitira kuti Wasu adarike. Tazoti tasvike mubank, bank richibve ravharwa ndobva Wasu apiwe mari nepahwindo. Tazoti taende kunotenga grocery, mari ndokurambe kuite enough zvikanzi naWasu hazvinetse, ndokunyore tsamba kuna manager kuti ndini Wasu ndatenga."
mukadzi mukwasha ambuya murume muroora
Ma presents kuna mai
Paiva nevamwe vana vaiva naamai vaibva kuGhana. Rimwezuva vakafunga kutengera mai vavo mapresents, wekutanga akatenga mota yekufambisa vachinoona hama.
Wechitwo akatenga imba ine marooms 36, wechithree akavatengera parrot yaizovavaraidza ichitaura zvisina basa.
Mai vacho havana kunyatsofara nekuti vaiti havana hama muZimbabwe saka vaisazoshandisa mota yacho. Kune wechitwo vakati havana munhu wekugara naye mumba macho asi vakatenda wechithree vakati wakandipa kahuku endekainaka.
shiri mai vana
msuri bhazi kombi hwindi musalad
mukadzi bhedhuru murume
shiri zoo imbwa kamba
civil servants 2015